Dhibaatooyinka amniga sidoo kale waxaa sababa isticmaalka maktabadaha dhinac saddexaad | Laga soo bilaabo Linux
Arimaha amniga sidoo kale waxaa sababa isticmaalka maktabadaha dhinac saddexaad
Maalmo ka hor Vera code (shirkad amniga dalabka) ogeysiiyey adoo adeegsanaya boostada, daraasad ku saabsan dhibaatooyinka amniga ee ay keeneen maktabadaha furan ee furan codsiyada.
Baadhitaanka 86 ee keydka iyo sahaminta ku dhowaad 79 oo horumariyayaal ah, ayaa lagu ogaadey in XNUMX% ee mashaariicda maktabadda dhinac saddexaad loo wareejiyo koodhka aan mar dambe la cusbooneysiin.
Vera code ayaa tilmaamaya waxbarashadiisaama in dhibaatada ugu weyn la xiriirta dhibaatooyinka amniga ee codsiyada isticmaal maktabadaha furan ee furan waa halkii aad si firfircoon uga xiri lahayd, shirkado badan ay uun ku darayaan maktabadaha lagama maarmaanka u ah mashaariicdaada, iyada oo aan la tixgelin cusboonaysiinta suurtagalka ah ama xallinta khaladaadka goor dambe laga helay maktabadahaas.
Isla mar ahaantaana, wuxuu xusayaa in koodhka duugoobay ee maktabaddu uu sababo arrimaha amniga iyo in daraasaddan ay muujineyso in ku dhowaad 92% kiisaska looga hortegi karo si fudud iyadoo la cusbooneysiiyo koodhka maktabadda.
Maanta waxaan daabacnaa daabacaadda isha furan ee warbixinteena sanadlaha ah ee Amniga Gobolka. Isagoo si gaar ah diiradda u saaraya amniga maktabadaha furan, warbixinta waxaa ku jira falanqeyn 13 milyan oo baaritaan ah oo ka socota in ka badan 86.000 oo keyd, oo ka kooban in ka badan 301.000 maktabado gaar ah.
Warbixinta daabacaadda isha furan sanadkii hore, waxaan ku eegnay shaashad kooban oo ku saabsan isticmaalka iyo amniga maktabadaha furan ee furan. Sannadkan, waxaan ka gudubnay shaashad-waqti-waqti ah oo aan ku eegeyno firfircoonida horumarka maktabadda iyo sida ay horumariyayaashu ula falgalaan isbeddelada maktabadda, oo ay ku jiraan ogaanshaha cayayaanka.
Taas ka sokow cudurdaarka ah in maktabadaha aan la cusbooneysiin, Waa sabab inay ku fashilanto is waafajin kuwaas oo inta badan aan sal lahayn. Oo ay la soo gudboonaatay cudurdaarrada noocan ah Veracode ayaa cadeeyay tan ka soo horjeedda Daraasaddooda in ku saabsan 69% kiisaska la bartay, ayaa sheegay in nuglaanta lagu hagaajiyay sii deynta balastarka taas oo aan la xiriirin isbeddelada shaqeynta.
Warbixinta ayaa shaaca ka qaaday in inkasta oo maktabadaha furan ee furan ay aasaas u yihiin ku dhowaad dhammaan barnaamijyada, haddana ma aha aasaas adag, laakiin waa aasaas si joogto ah isu beddelaya oo beddelaya. Si kastaba ha noqotee, dhaqamada horumarka marwalba lama jaan qaadaan dabeecadda firfircoon ee maktabadahaan, taasoo ka dhigeysa inay ururada soo shaac baxaan
Sidoo kale wuxuu xusayaa in saameynta ay sidoo kale ku leedahay iyadoo la ogeysiinayo horumariyeyaasha muuqaalka nuglaanta: saniga horumariyeyaasha waa la ogeysiiyey dhibaato ka jirta maktabadda, ee 17% kiisaska dhibaatada waa la xaliyay saacad iyo 25% usbuuc gudihiis.
Haddii ay jirto macluumaad ku saabsan sida nuglaanta maktabadda ay u horseedi karto inay waxyeello u geysato codsi, 50% kiisaska balastarka ayaa la sii daayay saddex toddobaad gudahood, iyada oo aan la siinin macluumaad, ka-qaadista nuglaanta waxay ahayd inay sugto 7 bilood ama ka badan.
Qeyb rubuc ah horumariyeyaasha la daraaseeyay waxay yiraahdeen markay dooranayaan maktabad gundhig, diiradda ugu weyni waa shaqeynta iyo liisamada koodhka, oo markaa markaa ka dib ayaa la tixgeliyaa amniga.
Waxaan eegeynaa maktabadaha ugu caansan 2019 vs. 2020, iyo sidoo kale maktabadaha ugu caansan ee leh jilicsanaanta la yaqaan ee 2019 vs. 2020. Qeybta ugu hooseysa: waxaad ku dari kartaa isticmaalka maktabadaha furan ee furan liiska waxyaabaha sida weyn isu beddelay 2020. Wixii kulul iyo wixii aan ahayn, iyo wixii amaan ah iyo wixii aan ahayn, dhaqso ayuu isu beddelaa.
Waa in la ogaadaa in xaaladda xaqiijinta liisanka koodhku aysan ka fiicnayn: 54% jawaabeyaasha ayaa qirtay in aysan had iyo jeer hubin liisanka koodhka maktabadda kahor intaan lagu dhex darin badeecadooda. Kaliya 27% jawaab bixiyayaashu waxay ku dhaqmaan xaqiijinta iswaafajinta shatiga.
Ugu dambeyntii, haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka ogaato daraasadda ay sameysay shirkadda Veracode, waad la tashan kartaa faahfaahinta Xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Arimaha amniga sidoo kale waxaa sababa isticmaalka maktabadaha dhinac saddexaad
Waa caadi in maktabad la dhigo nidaamka faylka maxalliga ah halkii la isku xiri lahaa, maadaama mararka qaarkood xiriirku is beddelo oo shaqadiisii ​​luntay.
Copilot, Kaaliyaha AI ee GitHub wuxuu dhaleeceyn adag kala kulmay bulshada ilaha furan
Ubuntu Touch OTA 18 horay ayaa loo sii daayay kuwana waa warkiisa